Ukuvela kolawulo lwabazali kwi-iOS kunye ne-iPadOS ngokukhutshwa kweXesha lokuSebenzisa i-API | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | 02/08/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 30/07/2021 10:13 | iOS 15, Izaziso
IOS 12 yaziswa ngo-2018 iseti yemisebenzi edweliswe phantsi kwegama leXesha lokuSebenzisa. yenza umsebenzisi azi malunga nokusetyenziswa kwezixhobo kunye nokuzama ukuqinisekisa impilo yedijithali. Ingakumbi kuthathelwa ingqalelo ukwanda kwenani leeyure ezichithwa ngabantu phambi kwezikrini. Emva kwexesha, iApple yayisebenzisa njengesixhobo se Ulawulo lwabazali. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, kwi WWDC 2021 kwaziswa ukuvulwa kweXesha lokuSebenzisa i-API kubaphuhlisi, Ukuvumela isikhokelo esisemthethweni kulawulo lweeapps zabo.
I-Apple ivula ixesha lokuSebenzisa i-API kubaphuhlisi
Abaphuhlisi banokusebenzisa i-API kwizicelo zolawulo lwabazali ukuxhasa uluhlu olubanzi lwezixhobo zokuba ngumzali. I-API ibonelela abaphuhlisi ngeempawu eziphambili ezinje ngezithintelo eziphambili kunye nokubeka iliso kwimisebenzi yesixhobo ukuze ubumfihlo bubekwe phambili.
Uninzi lweeapps ezisungulwe ukusukela ngo-2018 ngokudityaniswa kwe- Sebenzisa ixesha kwindalo yeApple Basuswa ngenxa yokwaphula imigaqo yeVenkile yeApp. Uninzi lwaleyo migaqo yayiyeyokudityaniswa kolawulo lomsebenzi ngabantu besithathu ngaphandle kolawulo oluphakathi oluvela kuApple. Nangona kunjalo, ngokufika kweXesha lokuSebenzisa i-API, yenziwe ukuba ifumaneke kubaphuhlisi isakhelo solawulo ukuqinisekisa ubumfihlo babasebenzisi.
Khumbula ukuba ixesha lokuSebenzisa lenziwe ngeendlela ezininzi, phakathi kwazo zezi: ixesha lokungasebenzi, lihlala livunyelwe, umda wokusetyenziswa kweapps, umda wonxibelelwano kunye nezithintelo. Ezi zixhobo zintlanu zivumela umsebenzisi lawula ulawulo lwexesha olichitha phambi kwesixhobo. Ukongeza, ayisiyi-iOS kunye ne-iPadOS kuphela enale umthwalo yezixhobo, kodwa iMacOS iyayidibanisa.
Izibonelelo zokuvula ifayile ye- API I-Airtime kwi-iOS, i-iPadOS kunye neMacOS iwela ikakhulu kubazali. Kulawulo abalusebenzisayo ngaphezulu kwabantwana babo xa besebenzisa izixhobo zeApple:
Banokukhangela imbali yokuvelisa kwakhona, ukubrawuza, njl. Ukuze ubathintele ukufikelela kwiindawo ezingafunekiyo okanye kwiintengiso kumaqonga okusasaza.
Banokunqamula abantwana babo kuyo nayiphi na indawo ababona ingalunganga.
Imisebenzi yemihla ngemihla inokulandelelwa kwiifowuni, kwiikhompyuter okanye kwiitafile.
Kuvunyelwe ukubeka esweni iiklasi kunye neendlela ezikwi-Intanethi zabantwana bakho.
Isakhelo sexesha lescreen sikunika izixhobo ozifunayo ukunceda abazali nabagcini babajongileyo ekusetyenzisweni kwabantwana kwiwebhu.
I-beta yesithathu yabaphuhlisi beenkqubo ezintsha ze-Apple ngoku iyafumaneka
Ngokuka-Apple, esi sikhokelo solawulo lwe-API siza kuvumela abaphuhlisi ukuba balinganise umsebenzi weeapps zabo kwiizembe ezahlukeneyo. Phakathi kwazo zezi:
Xela idatha yokusetyenziswa kwewebhu
Thatha inyathelo xa umzali okanye umgcini ebhloka i-URL okanye eqala ukusebenzisa izithintelo
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ukuvela kolawulo lwabazali kwi-iOS kunye ne-iPadOS ngokukhutshwa kweXesha lokuSebenzisa i-API
I-Telegram ihlaziywa ngeefowuni zevidiyo kunye nababukeli abangama-1000